Free DAW AUNG SAN SU KYI Now !!! | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Free DAW AUNG SAN SU KYI Now !!!	October 24, 2008
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' NEWS,UN — Nyo Gyi @ 7:02 am
ဒေါ်စုအား လွှတ်ပေးခြင်းပင်ဟု ဘန်ကီမွန်း ပြောကြား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 22 2008 23:09 – မြန်မာစံတော်ချိန်
(www.mizzimaburmese.com မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးခြင်းသည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း ကုလ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ယမန်နေ့က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကုလ အထွေအထွေ ညီလာခံသို့ တင်သွင်းသော မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သည့် သူ၏ အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာပြည်၏ အနာဂတ်တွင် သက်ဆိုင်သူ အားလုံး ပါဝင်နိုင်မှုကို သေချာနိုင်စေရန် နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်း မရှိကြောင်း ပြောဆိုရာတွင် ယခုလို ထည့်သွင်း ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် နူးညံ့သောလမ်းခွဲတခုသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းသော လမ်းစဉ်အပြင် အခြား စစ်မှန်သောနည်းလမ်း မရှိတော့ဘဲ၊ ယခုအချိန်သည် အစိုးရရော အတိုက်အခံများပါ တဦးနှင့်တဦး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် နည်းလမ်းရှာဖွေ၍ တိုင်းပြည်၏ အကျိုးအတွက် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကြရမည်” ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
အစီရင်ခံစာသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိ ကြားကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအရ အသေစွဲကိုင်ထားမှု မဟုတ်ဘဲ၊ ကွဲပြားသော နည်းလမ်းများအား ကြိုးစားရှာဖွေရန်အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဆက်လက်တိုက်တွန်းထားသော်လည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို မှန်ကန်စွာ မတုံ့ပြန်ခဲ့သည့်အပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကြောင်း သူက ဖော်ပြထားသေးသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက “ဒီကိစ္စမှာတော့ ကံမကောင်းစွာဘဲ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ အားလုံး ပါဝင်လာနိုင်မှုနဲ့ ယုံကြည်အားထားရမှုတွေ တိုးတက်လာဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တိကျတဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို စစ်အစိုးရက လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု အစီရင်ခံစာထဲတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုထားသည်။
အစိုးရသည် သူ၏ လမ်းပြမြေပုံ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည် ဖော်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာကာ စိန်ခေါ်မှုများ ပိုများလာသလို၊ ပို၍ပင် အကွဲအပြဲများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အာရုံစိုက်ခြင်းသာ ပိုတိုးလာသည်ဟု သူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ကုလသမဂ္ဂ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကြိုဆိုပါသော်လည်း စစ်အစိုးရက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကုလ၏ အားထုတ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် စစ်အစိုးရက ထိုသို့ မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါက နောက်တမျိုး လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းရှိဖို့လည်း ယခုလို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
သူက “ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ အဲ့ဒါဟာ အကျိုးရှိနိုင်မှာပါ။ မျှော်မှန်းထားသလို အဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုး မရှိခဲ့ရင် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ တခြားနည်းတခု လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
NLD ပါတီအနေနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ပထမ ခြေလှမ်းအဖြစ် ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက တောင်းဆိုသည်ကိုလည်း ကြိုဆိုသည်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရင်တော့ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စတင်မှုတခုဖြစ်ပြီး၊ အာဏာပိုင်တွေ ပြုလုပ်ပေးမယ့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆီ သွားရာမှာ ပထမ ခြေလှမ်းတခုလည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
သို့သော်လည်း NLD သည် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်းက မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ခဲ့သော အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ကို “အကျိုးမရှိ” ဟု ပြောဆိုဝေဖန်လိုက်သည်။
“ကုလသမဂ္ဂဟာ အကျိုးရှိရှိ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ အကန့်အသတ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုလသမဂ္ဂဟာ ဒီကန့်သတ်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့် စစ်အစိုးရကို ဆွေးနွေးတိုက်တွန်း ဖိအားပေးသင့်တယ်” ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
(Photo Source: http://www.thanlwin.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=236)